म बाँचेर यी कोपिलालाई फूलाउन चाहान्छु - Sidha News
म बाँचेर यी कोपिलालाई फूलाउन चाहान्छु
मानव जीवनको सबैभन्दा ठूलो धर्म नै मानव सेवा हो । कुनै मानिसको सानो सहयोगले कसैको जीवन बाँच्छ । एक पटक सोच्नुहोस् त सन्तान नै सृष्टिको खेल कसैले चाहेर हुन्न ।जन्माएपछि हुर्काउन कति लाग्छ ।
कसैसँग मोबाईल एपपनि हुन्न त्यस्ता व्यक्तिले यो सन्देश जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् । म बाँच्न चाहान्छु ।मानिसको श’त्रु रो’ग समान अरु को हुन सक्छ र ? रोगले सानू ठुलो बुढो तन्नेरी, धनी, गरिब कहाँ भन्छन् र ? भर्खरै २१ बर्षको कलिलो उमेरमा नै मेरो पाठेघरमा संक्रमण भएर पित्तथैली र मृगौला सम्ममा असर पार्दै गएको हुनाले बिगत १ वर्षदेखि बिरामी छु ।